Nchịkọ Akụkọ: Oriakụ Obianọ Enyena Ndị Ụwa na-atụ n'ọnụ Karịrị Nrị Anọ Ihe Onyinye - Igbo News | News in Igbo Language
Nchịkọ Akụkọ: Oriakụ Obianọ Enyena Ndị Ụwa na-atụ n'ọnụ Karịrị Nrị Anọ Ihe Onyinye
Sep 30, 2017 - 16:36 Updated: Jan 22, 2021 - 16:17
Nwunye aka na-achị steeti Anambra bụ oriakụ Eberechukwu Obianọ enyena mmadụ karịrị narị anọ n'ọnụ ọgụgụ, bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ihe onyinye na enyemaka dị iche iche. Oriakụ Obianọ nyere ihe onyinye ndị a oge ọ gara mgbaru n'okpuru ọchịchị 'Anambra West' dịka otu n'ime ngagharị ya nke ọ malitere iji gazuo okpuru ọchịchị iri na otu e nwere na steeti ahụ.
Nwunye aka na-achị steeti Anambra bụ oriakụ Eberechukwu Obianọ enyena mmadụ karịrị narị anọ n'ọnụ ọgụgụ, bụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ihe onyinye na enyemaka dị iche iche.
Oriakụ Obianọ nyere ihe onyinye ndị a oge ọ gara mgbaru n'okpuru ọchịchị 'Anambra West' dịka otu n'ime ngagharị ya nke ọ malitere iji gazuo okpuru ọchịchị iri na otu e nwere na steeti ahụ. O kelere ha maka nkwado ha nyere ọchịchị nọ ugbu a na steeti ahụ ma rịọkwazie ha ka ha ghara ikwe ka onye ọbụla duhie ma ọ bụ rafuo ha, ọ kachasị n'oge nhọpụta a na-akpụdobe nso na steeti ahụ.
Ọ dụzịkwara ndi nne ka ha na-gbasi mbọ ike iji bụrụ ndị na-akwụrụ onwe ha n'ihe ụfọdụ, na-abụghị ndị ba-adabere ma ọ bụ chekwube na di ha n'ihe ọbụla ha chọrọ iji ego ime.